​के हो सुगर ड्याडी रिलेशनसिप ?
Tuesday,4Sep, 2018 2:54 PM
संसारका कयौं देशका सम्पन्न र धनी व्यक्तिलाई सुगर ड्याडी बनाउने चलन छ । सुगर ड्याडीको अर्थ के हो ? यसलाई बुझ्न त्यति कठिन छैन । खासमा, युवतीहरुले ऐसआराम र सुख सुविधाका लागि एक यस्तो व्यक्तिको छनौट गर्छन्, जो पैसावाल होस् । त्यो पैसावालसँग उनीहरुले मज्जाले समय विताउँछन्, सेक्स पनि गर्छन् । त्यस्ता प्रौढ व्यक्तिहरुलाई सुगर ड्याडी भनिन्छ ।
यसलाई ‘सेक्स’कारोबारको नयाँरुप पनि भनिन्छ । तर, आधारभूत फरक के हो ? यो जान्नको लागि पहिला इवालाई भेटौं ।
नैरोबीको एभिएशन कलेजमा पढ्ने १९ बर्षीया इवा आफ्नो सानो कोठामा बेचैन देखिन्छिन् । उनीसँग जम्मा १०० केन्याई शेलिङ छ । भोलिका दिनको खर्च कसरी धान्ने भन्नेमा उनमा चिन्ता देखिन्छ ।
इबा राम्री बनेर घरबाट बाहिर निस्कन्छिन् । एउटा सिटी सेन्टरमा पुग्छिन् र आफुसँग सेक्स गर्ने पुरुषको खोजी गर्छिन् । दश मिनेटभित्रै उनले यस्तो पुरुष भेट्छिन्, जसले सेक्सको बदलामा १००० केन्यायी शेलिङ दिन तयार हुन्छ ।
इवाको ठिक उल्टो छ शिरोको जीन्दगी । शिरो ६ बर्ष पहिले युनिर्भसिटीमा पढ्थिन् । यस्तै १८– १९ बर्षको उमेर थियो होला । त्यहीबेला उनको भेट एक विवाहित पुरुषसँग भयो जो उनीभन्दा ४० बर्षले जेठो थियो । पहिलो भेटमै त्यो पुरुषले शिरोलाई केही उपहार दियो । सैलुनमा लग्यो । दुई बर्षको सम्बन्धपश्चात उसले शिरोका लागि एउटा राम्रो अपार्टमेन्ट पनि किनिदियो । चार बर्षपछि शिरोका लागि त्यो पुरुषले नियारी काउन्टीमा जग्गा पनि किनिदियो । यसको बदलामा त्यो पुरुषले आफुले चाहेको बेलामा शिरोसँग सेक्स गर्छ । अब तपाईले बुझिसक्नुभयो होला शिरोले आफ्नो लागि एक ड्याडी सुगर बनाइसकेकी छिन् ।
केन्याको समाजमा शिरोजस्ता युवतीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । जुन सोशल प्लेटफर्मदेखि रेस्टुरेन्ट सबैतिर देखिन थालेका छन् । युनिर्भसिटी अफ नैरोबीमा पढ्ने सिलासा नयानचावनी भन्छिन्, ‘शुक्रबारको रात युनिर्भसिटीको होस्टल बाहिर हेर्नुहोस् । कसको कार आउँदैन– मन्त्री, नेता सबैका ड्राइभर आएर जवान युवतीहरुलाई लिएर जान्छन् ।’
यद्यपि कति युवतीहरु सुगर ड्याडी रिलेशनमा छन् भन्ने कुनै यकिन तथ्याङक भने छैन । तर, बीबीसी अफ्रिकाको तर्फबाट ‘बोसारा सेन्टर फर विहेवयरियल इकोनोमिक्स’ले एक अध्ययन गरेको छ । जसमा १८ देखि २४ बर्षका २५२ छात्राहरु सहभागी थिए । तीमध्ये २० प्रतिशत छात्राहरुले आफ्नो शुगर ड्याडी रहेको बताएका थिए । उनीहरुले आफ्नो साथीहरुमध्ये करिब २४ प्रतिशतको सुगर ड्याडी रहेकोसमेत दाबी गरेका थिए ।
समाज बदलिएको संकेत
यो अनुसन्धानको दायरा निकै सानो थियो तर यसमा केन्याइ समाजको बदलिंदो संकेत भने जरुर छ । यस्तै एक युवती छिन्, २० बर्षीया जेन । जेनले आफ्नो लागि दुईजना सुगर ड्याडी बनाएकी छिन् । ग्राजुयशन गरिरहेकी जेन भन्छिन् उनको टम र जेफसँग अलग–अलग सम्बन्ध छ । जेन भन्छिन्, ‘उनीहरुले मलाई मद्दत गर्छन्, तर केबल सेक्सका लागि मात्र होइन । गफ गर्न, आफ्नो मनको बह पोख्न र सँगै बस्न पनि उनीहरु मलार्इं बोलाउँछन् ।’ जेनका अनुसार उनले आर्थिक सुरक्षाको लागि यस्तो फैसला गरेकी थिइन् ताकि आफ्ना साना बहिनीहरुलाई सहयोग गर्न सकियोस् । यस्तै युवतीहरुको कहानी नैरोबी डायरी नामक ‘रियालिटी शो’मा देखाइदै छ ।
जेनजस्तै ब्रिजेट पनि छिन् । नैरोबीको झुग्गी झुपडी इलाकाको काइबेरामा बस्छिन् । उनी घरमा काम गर्ने महिला थिइन् । तर, अहिले सोशल मिडियामा उनको काफी चर्चा छ । उनले आफ्नो एक सेक्स भिडियो सुट गरिन् । यसपछि उनको फलोइङ निकै बढेको छ ।
गुड लाइफको टेस्ट
यत्तिमात्रै होइन । सुगर रिलेशनपछि उनीहरुको दुनियाँ पूरै बदलिएको छ । एकसे एक महंगा ब्रान्डको कपडा र व्याग । ब्रिजेटको मुताविक उनी आफ्नो जीवनमा गुड लाइफको टेस्ट लिन् चाहन्छिन । २५ बर्षीया ग्रेस पनि यस्तै भीडमा सामेल छिन् । उत्तर नैरोबीमा बस्ने ग्रेस एक बच्चाकी आमा हुन् । उनको सपना गायिका बन्ने छ । उनी नाइट क्लबमा गाउँछिन् र यस्तै एक पुरुषको खोजीमा छिन् जसले उनको करियर बनाउन मद्दत गर्न सकोस् ।
तर, यस्तो चलनमा अहिले निकै सवालहरु उठिरहेको छ । मानिसहरु यस्तो संस्कृतिले महिलाहरुको सशक्तिकरण हुन नसक्ने बताउँछन् । बरु यसले महिलाहरुको शरीर पुरुषको लागि आनन्दको लागि मात्र हो भन्ने भावना फैलाउँछ । बीबीसी